Ogaden News Agency (ONA) – War deg-deg ah – KT Zinawi oo la kulmay gadood xoogan
War deg-deg ah – KT Zinawi oo la kulmay gadood xoogan
Posted by ONA Admin	/ May 23, 2012
Wariyayaasha wakaalada ONA eek u sugan goobta uu ku soo dagay dhiigyacab Meles ayaa soo wariyay inuu ku sigtay in laqabto maanta iyadoo ay ku soo xoomeen dad aad u careysan oo ka kala yimid meela kala duwan markay maqleen inuu la soo dajiyay si qarsoodi ah Hotel ku yaala magaalada Johanesburg.
Sidaan horay u lawada soconay waxaa dalka South Africa imanyey dhiig yacab Zanawi oo la filayay inuu yimid maalinta 24-25ka bishan, hasa ahaatee laga warhelay inuu si dhuumal ah ku soo galay xalay magalada Johanesburg xafada looyaqano Semtel ayna dagan yahiin madaxad dawaladu aadkana loo ilaaliyo.
Jaaliyada Oromad oo aad ula socotay dhaq dhaqaaqiisa loona sheegay meesha uu ku dagay ayaa hal mar ah ku diday, iyadoo markii dambe ay jaaliyada Ogadeniya ay iyaduna halkaa ku gaadhay. Sawaxan iyo qeelo iyo qamaam badan kadib waxaa laga yaabay in lagala boxo hotelka waxaana goobta yimid policeka oo soo buxu dhafiyey.
Waxaa la damacay in KT Zanawi laga saaro goobta oo hotel kale lageeyo. Hasa ahaatee boqolal Oromo ah oo cadhaysan ayey iska hor yimaden wuxuna ku sigtay in gacanta lagu dhigo. Ugu dambayntii ciidamada amaanka ayaa iscimalayey bomka gacanta ee dadaka kaga ilamaysiiya iyo qalab kale, halkaasoo uu gabalka isula dhacay.
Wixii warar ah ka soo kordha waan la socon doonaa iyadoo loo balansan yahay banaabax balaadhan in lagu qaado kolba meesha la geeyo.